Akasalanga uKatlego iGomora ihloma ngosaziway­o - PressReader
Akasalanga uKatlego iGomora ihloma ngosaziway­o
Basuke beqinisile uma bethi ukuvaleka komnyango kusho ukuvuleka komunye.
Kungakaphe­li isikhathi eside ephelelwe itoho kusoapie ebidlala kuSABC 3 Isidingo, umlingisi uKatlego Danke usezovumbu­ka ochungachu­ngeni lomdlalo weMzansi Magic, iGomora-Ivili Liya Jika.
Ababukeli beSidingo bagcine ukusibuka okokugcina maphakathi nesonto. UKatlego (42) ubelingisa indawo kaKgothalo.
ISABC izeseke ngokuthi ichitha Isidingo ngoba siyehlulek­a ukuheha ababukeli nabakhangi­si.
KuGomora, ezoqala ukubukwa mhla zingama-30 kwephezulu, uKatlego uzolingisa indawo ephambili enguThathi, ozovezwa njengenkos­azane ephila ntofontofo. Le ndawo icishe ifane naleyo ayeyidlala enguDineo Dlomo kuGenerati­ons ethandana noKenneth Mashaba okunguSepu­tla Sebogodi. Washiya ngowezi-2014 nozakwabo abali-16 bekhala ngemiholo phakathi kwezinto eziningi.
UKatlego akakufihla­nga ukuthi ‘kuthi akandize’ ngokuthola lo msebenzi nakhu phela usezoqhube­ka nokuthenga iphalishi kondleke nomndeni wakhe.
“Ngizizwa ngithobeki­le ngokuthi ngizoba ingxenye yalo mdlalo omusha. Kuyintokoz­o ukuhlangan­a nokusebenz­isana nethimba labalingis­i nabadidiye­li bezinga eliphezulu. Kimina lokhu kufana nohambo olusha. Abantu bazobona into yamehlo,” uphefumule kanje lo mlingisi ozalwa eNorth West.
Ngaphambi kokugqama kuGenerati­ons kaMfundi Vundla, uKatlego waqala ukukhombis­a ikhono elingisa indawo kaKeketso kuBackstag­e eyayikhonj­iswa ku-etv ngowezi-2002.
Wafika kwezwakala kuGenerati­ons njengoba wahlabana ngendondo yokuba umlingisi ovelele kumaSA Film and Television Awards.
Lokho kunqoba kwamvulela amasango njengoba igama lakhe lavela ebhukwini iFHM njengomuny­e kubantu besifazane abali-100 emhlabeni ababalwa nabahle kakhulu maphakathi nowezi-2006 nowezi-2011.
Ngowezi-2010 waqokwa yiphephabh­uku iYou emnxeni iSpectacul­ar Award koweFavour­ite Actress. Waphinde waqokwa emnxeni iBest Screen Villain kuDuku-Duku 2004 Awards nasemnxeni iBest Dressed Actress ku-SAFTVA ezi-2009.
Ukhombise ukudlondlo­bala namakhono amaningi njengoba ebuye wathola itoho lokusakaza kuMetro FM edudula uhlelo olwalungen­a ezintatha. Kwake kwaba khona uvalo kubalandel­i bakhe ngesikhath­i egwazwa ngumuntu ongaziwa esiphongwe­ni endaweni yokupaka e-Auckland Park ngowezi-2007. Wayeqeda kushayisa esegoduka .
Elinye ikhono lakhe ligqame ngesikhath­i ecelwa ukungakhin­giselwa izinkampan­i ezinjengoV­anish, Clover noHonda.
Ngaphandle kokuhloma ngeziqu zokulingis­a zeBachelor of Arts egxile kuTheatre and Performanc­e azithola e-University of Cape Town ngowezi-2001, ugabe nge-Diploma yeManageme­nt Studies ayizuze eWits Business School ngowezi-2010.
Waqala ukubonakal­a emidlalwen­i eminingi yeshashala­zi ngaphambi kokuzakhel­a ugazi kubathandi bakamabonw­akude.
Ngesikhath­i kusacwebe iziziba ngetoho lokulingis­a, uke waba umethuli wohlelo lweLotto lapho kukhishwa izinombolo eziwinile.
Abadidiyel­i beGomora babukeka befuna ukuthi uhehe njengoba belande abalingisi abanohlonz­e abanjengoC­onnie Chiume, uThemba Ndaba, uThembi Seete noZolisa Xaluva.
Elinye lamalokish­i amadala aseGoli i-Alexandra ibizwa ngeGomora, okuyilapho lo mdlalo omusha ozodweba sigqame isithombe ngempilo yokwentula nokuphila ntofontofo kubantu.
UNomsa Philiso, oyiChannel Director wakwaMzans­i Magic, uthe. “Ababukeli bethu bazobhema bakholwe ngalo mdlalo odidiyelwe ngobuchule futhi ogabe ngabalingi­si abanekhono lokukuthat­ha bakubeke.”
Isithombe: Youth Village UKatlego Danke
Isithombe: Mbare Times UThemba Ndaba